I-SNOPE ibambe intlanganiso yonyaka ukubhiyozela UNYAKA OMTSHA ngomhla wama-29, JAN.
Kuza kwiholide YONYAKA OMTSHA, uSNOPE ubambe indibano yonyaka ukuyibhiyozela kunye nabo bonke abasebenzi. Umphathi jikelele wenze isishwankathelo sentsebenzo yonyaka ophelileyo kwaye wabancoma abasebenzi ababengezelelweyo. Amabhaso awahlukeneyo athiwa thsuphe “njengowona mbasa mhle womsebenzi” “Igalelo eligqwesileyo ...
USNOPE ucule ikhontrakthi neqela lezemfundo laseTANANCHENG ukuhlakulela iitalente ezingakumbi
Iqela lezemfundo laseTIANCHENG yinkampani yobungcali egxile ekuboneleleni ngeenkonzo zorhwebo lwangaphandle. Yinkampani yeqela lokuqala egxile kwinkqubo yokusebenza ngokuzenzekelayo kwesiseko solawulo lweshishini langaphandle kwishishini eTshayina. Okwangoku, iqela lihanjiswa kulo lonke igama ...
I-SNOPE IPHUMUZE UYILO OLUTSHA LWAMANDLA AMANDLA KUNYE NOHLOBO C PORT
Uhlobo c izibuko sele lityekele entsha ngeeMacs ezininzi kunye neeLaptops zeWindows ngoku ezinesimo esibonakalayo,. Isinxibelelanisi sikalwe ukuhambisa kunye nokufumana ukuya kuthi ga kwi-100W yamandla. Uhlobo lwe-C lwe-USB lutyhala ukuhanjiswa kwamandla nangakumbi xa uqhagamshela amazibuko amabini kunye, Ukuzisa abathengi ukhetho oluninzi, ...